Dzidza mushonga muUkraine - Ukrainian Munopinda Center
Wagadzirira here Dzidza Medicine kuUkraine?
1)mudzidzi Foreign vakodzera kutora United States Medical Licensing Kuongororwa uye kupinda Dzebasa Dzevakawana Dhigirii Medical (mugari wemo) chokurovedza United States.
2)IMED accreditation kunozivikanwa Nedzidzo Commission kuti Foreign Medical Kudzidza (ECFMG) uye Medical Council of Canada (MCC) nokuti kukodzera vakapedza kudzidza kuti tiwane advertising uye Licensure.
3)Ukraine Africa anozivikanwa ne World Health Organization
4) vadzidzi International vakodzera kuitawo kuUnited States Medical Licensing Kuongororwa & kugamuchira ECFMG advertising. The ECFMG advertising zvinoda kudzidza zvose kuti vakapfuura Danho USMLE 1 uye Step 2 (vose zvikamu), pasi kwokupedzisira inopangidza, uye kupa kopi akapedza kudzidza kuti dhipuroma kuti ongororo. Kamwe ECFMG advertising akapiwa vadzidzi vakodzera dzidzo Dzebasa Dzevakawana Dhigirii Medical (mugari wemo Training) muUnited States.
)Most Ukraine Medical Africa vari kuzivikanwa Indian Medical Council, Pakistan Medical uye Dental Council, European Council of Medicine uye General Medical Council (shoma Registration) kubva UK.
6)Most Ukraine zvokurapa Africa rara zhinji Scientific Institutions yaimbopindwa USSR uye rose, akadai The Poland Medical Academy, The Cambridge University, The Virden University, Kumakiriniki pamusoro Urgent Medicine muGermany, Bherujiyamu, Austria uye Israel. Medical nzvimbo Cardiff (England), Medical Center Sent-Etien (Furanzi), New York Medical Center, Ukrainian Medical Society muCanada uye Austria.
7) Ukraine zvokurapa vadzidzi vakodzera dzinowanikwa United States Medical Licensing Kuongororwa (USMLE) uye vakawanda nezvimwewo ...
8) Ukraine zvokurapa vadzidzi vakodzera The Professional mitauro Rinoongorora (dumbu) of United Kingdom (UK) VAKAWANDA MORE nezvimwewo.
Vazhinji Ukraine dzokurapwa Africa ,mumakoreji inopa zvinotevera kosi vadzidzi vanoda kuti Bachelor kuti dhigirii, pashure chesekondari yepamusoro.
General Medicine (Doctor of Medicine Degree) – 6 makore kosi
Dentistry (Dhokotera Dentistry Degree) – 5 kosi gore
Pediatrics (Doctor of Medicine Degree) – 6 kosi gore
chitoro chemishonga (Bachelor of Pharmacy Degree) – 5 kosi gore
Zviri gore matanhatu kosi awarding “Doctor of Medicine” (MD) dhigirii. Izvi yakaenzana “Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery” (MBBS) dhigirii paakavapa ne Commonwealth nyika dzakadai UK, Ositireriya, India nezvimwewo. Rubvumo kuti kosi ari vakatangawo pashure chibvumirano akasaina zvakakodzera pakati mudzidzi uye kuyunivhesiti. Kubhadhara mari yechikoro vadzidzi dzakawanda dziri denominated muna USD uye kuramba kugara pamusoro ya chibvumirano.
Svikiro kurairirwa ndiye Chirungu kwemakore ose matanhatu vadzidzi dzakawanda. Kosi yacho inopiwa Russian / wokuUkraine nokuda dzemunharaunda musarudzo. Musarudzo kudzidza Chirungu unosvikirwa kwemakore matanhatu vanopiwa makirasi mutauro maviri okutanga, saka vave nyanzvi mumutauro wemo kuti vachikurukurirana varwere uye kushandiswa nezuva.
Zvaidzidziswa inodzidziswa University unogamuchirwa neShumiro Education uye Bazi Public Health rweUkraine.
Vadzidzi vari achiumbwa mapoka maduku 6-10 nokuti makirasi. Nokuda boka duku mudzidzi, nomumwe pfungwa zvinogoneka mudzidzi mumwe nomumwe. Kwemakore maviri okutanga vadzidzi vanodzidziswa mukirasi. In 2nd gore, vadzidzi ava vanodzidziswawo kurapwa nyaya uye akapiwa kurapwa kurovedza Hospitals dzinobatsira ruzivo.
Mudzidzi anofanira kuverenga bhuku uye kuita hwokuzvidzora gadziriro usati wapinda kirasi. Notes inotibatsira chete. Vadzidzi vanogona kwereta mabhuku kuraibhurari kana kutenga mabhuku avo pachavo. Students vanoda 100% kirasi misangano. Kana vari vasipo, vanofanira rework kirasi iri vhiki, pashure wakakodzera mvumo kubva kosi mudzidzisi.
Mumwe kirasi Session ari graded. Pane dzimwe bvunzo kuti vakapfuura. Gore negore dzidzo kunokosha uye kunofanira akapfuura pamberi mudzidzi Unotenderwa dhigirii. Kuwedzera kuongororwa womukati yeYunivhesiti, Mudzidzi kachipinda State Test (kuongorora zvekunze) asati zvidzidzo 3rd uye 6th gore dzidzo. Mugore chikoro, mudzidzi ari kuedzwa hunobatsira noumhizha pamusoro kurapwa kurangwa ari murwere mubhedha (Practical bvunzo) uye zvesayenzi uye yokungotaura noumhizha (yokungotaura bvunzo). Zvose zvinofanira wakapfuura pamberi chikoro.
Ndapedza, mudzidzi anogona kudzidzira kana kunyoresa pamusoro 20 specializations zvaipiwa kuyunivhesiti akadai cardiology, zvekuchipatara mushonga, oncology, radiology, voruzhinji utano nezvimwewo. Shandisa pano kudzidza mushonga
Ndicho kosi gore mashanu. Vadzidzi vanodzidziswa dzinokosha zvokurapa uye chaivo Profile uye kurapwa nokuranga nokuda dentistry. On pokupedza pakudzidza vadzidzi vari paakavapa ari “Diploma ane Doctor ” kana ukuru BDS. Vadzidzi vanodzidziswa yokungotaura uye kurapwa nokuranga zvakadai kuchirapa uye vachibatsira stomatology. The dhipatimendi zvakanaka kukwanisa tichitarisa musha, midziyo, pakudzidzisa. Idzidziso chipatara pakati guta akatakura varwere. Students kudzidza chikuru matambudziko dentistry: Dental caries, Periodontitis uye zvirwere mucous Kamudzira mumuromo mhango. Chikuru basa iri fakaroti ndiko kukwana yepamusorosoro dentistry dzidzo. The fakaroti optimizes yedzidzo muitiro nechinangwa simba mumurangariro kugona revadzidzi, kuva tsika nokuda dzidzo & kutsvakurudza uye nekuisa mumwe rokusika nzira nokuda nenyanzvi basa. The fakaroti chinobatsira vadzidzi vawane ruzivo kwazvo munyika mazino munda. Inokura uye anovandudza, rokutora zvose zvakanakisisa, kubva pane zvakaitika kuyunivhesiti basa. The University anopawo romukova akapedza kudzidza kosi uye kurovedza zvekuchipatara vari Dentistry. Shandisa pano kudzidza dentistry
Zviri kosi gore matanhatu awarding ari “Doctor of Pediatrics” dhigirii. Zvinonzi kuuyiswa wokuRussia uye Ukrainian mutauro chete. The kosi zvakafanana “General Medicine” asi kunotoda ndeye mucheche, Kuvhiya mucheche nezvimwewo. Avo apedze kosi iyi kuwana dhipuroma ane wevana. Mudzidzi anogamuchira zvoutachiona uye wezvokurapa dzidzo mukuru muna maviri okutanga. dzidzo chiremba rinotanga kubva wechitatu rechitanhatu year.Students mukudzidzire ruzivo mune vana anatomi, physiology, zvokurwara uye utsanana, zvirwere, Mabatirwo tinozvarwa urema, hudyu uye hudyu-kwemajoini kukura uye nevamwe. Post girajuweta makosi uye kurovedza zvekuchipatara unopiwa. Shandisa pano kudzidza Pediatrics
Zviri kosi gore mashanu awarding ari “Bachelor of Pharmacy” dhigirii. Course runopiwa muchiRussia uye Ukrainian mutauro chete. Vadzidzi vanodzidziswa kunyatsogona mushonga uye biology uye vamwe zvekuchipatara zvinhu zvakare. On pakupera ari dhipuroma pamusoro mishonga iri paakavapa. Ivo vakadzidziswa kushanda mumapoka uye / kana pakutsvakurudza. A yakarongeka zvinoumbwa kudzidziswa zvikuru dzakakodzera pava-. Mutungamiriri madhipatimendi ndivo: pharmacology, bhayoroji, genetics, bhotani, mu-makemikari kemisitiri, Analytical, mumuviri uye makemikari kemisitiri. Post girajuweta uye tenzi makosi tiri kupiwa Pharmacy. Shandisa pano kudzidza chemishonga
Chinhu matatu gore kana kosi mana gore awarding ari “Bachelor of Nursing” dhigirii. Vadzidzi vokutanga kudzidza dzinokosha zvokurapa uye chaivo nokuranga, ipapo kurapwa nyaya uye ukoti mumamiriro ezvinhu akasiyana. Kurovedza hunoshanda uye yokungotaura anopiwa mukirasi uye muzvipatara.	Shandisa pano kudzidza ukoti
Courses akapa Ukraine Medical Africa kana mumakoreji kutevera Process vaine chinangwa kutanga European yepamusoro Area by muitiro rinosundwa 46 pokuita nyika uye Council of Europe. Zvinangwa chikuru ndeinotevera:
· Easy kutama imwe nyika kune imwe mukati European yepamusoro Area nechinangwa kwohumwe kudzidza kana basa.
· Wedzerai Kukwezva kuEurope yepamusoro dzidzo kuitira kuti vanhu vakawanda munyika isiri European kuuya kudzidza uye / kana basa Europe.
· Ipai Europe ine yakafara, yepamusoro uye yemhando ruzivo chawo, uye nechokwadi kukura Europe sezvo mudanga, rugare uye bvumidza vomunharaunda.
Useful nyaya pamusoro Ukraine
Tapota verenga nyaya iyi Ukraine. Zvichava dzinobatsira kwauri.
About Ukraine - Vhuṱanzi pamusoro Ukraine. Kunogona kufinha, asi chinobatsira
Kurarama Ukraine - uchapupu vadzidzi vokune dzimwe nyika. Pano vanoti chii vanoda muUkraine zvikuru
Cost kurarama muUkraine - zvose pamusoro mutengo muUkraine. Check kuti Ukraine ndiye yakachipa pashiri nyika muEurope.
Medical mumayunivhesiti muUkraine
wokuUkraine mumayunivhesiti ose makuru. Tikasarudza shoma kuti isu kufanana zvikuru.
Medical Africa muUkraine
Poltava zvokurapa & mazino yunivhesiti
Ndakanga achitsvaka mukana dzidzo mu Europe. Asi chikuru vakasarudzwa nevamiririri anondipa pusa. Ndinokutendai kuti kune Munopinda Center. Zviri abilyty chakakwana vadzidzi kuti anoda kudzidza kunze. Narwo zvose zviri nyore uye nyore, uye havafaniri kunetseka pamusoro rakavimbika pomutumwa.
Ukrainian Munopinda Center, Ndinoda kutaura kuonga zvikuru chikwata wako zvose. Iwe kuti kubvuma rangu nyore uye nyaradzo. Ndaiva zvimwe kutya pandakauya kuUkraine. Asi Ukrainian Munopinda Center kunondibetsera zvose. Handina chero matambudziko pano zvachose. Great nemhaka mudonzvo vose Ukrainian Munopinda Center.
Ndiri muUkraine. Ndiri kuwana dzidzo wezvokurapa. My kubvuma urongwa nokuda nyore chaizvo. Ndine vhiza pasina zvinetso. Ndiri kufara. Mazvita Ukrainian Munopinda Center. PS: bonuses Ako pakasvika Akatoshamisika. Ivo anondibatsira zvikuru kurarama muUkraine. Your ndiyo yakanakisisa uye iwe hanya vadzidzi.
Last update:18 Chikumi 19